Rindrambaiko fampisehoana ho an'ireo mpitaingina bisikileta, mpihazakazaka ary Triathletes | Avy amin'ny Linux
Rindrambaiko fampisehoana ho an'ny bisikileta, mpihazakazaka ary triathletes
Miaraka amin'ny fandrosoan'ny teknolojia, namboarina ny fitaovana ahafahana mitondra a fanaraha-maso tsara kokoa ny fampiofanana atleta ary manome anao ny refy marina momba ny fivoarany, ankoatr'izay, amin'ny tranga sasany, ireo fitaovana ireo dia manana algorithman matanjaka izay manome soso-kevitra fanao tsara hampitomboana ny fahombiazany. Iray amin'ireo fitaovana ireo ny GoldenCheetah mahery rindrambaiko fampisehoana ho an'ny bisikileta, mpihazakazaka ary triathletes, izay manamora ny famakafakana ireo angona azo avy amin'ireo fitaovana fanatanjahan-tena manokana.
1 Inona ny GoldenCheetah?
2 Endri-javatra GoldenCheetah
3 Ahoana ny fametrahana GoldenCheetah?
Inona ny GoldenCheetah?
Goldencheetah dia loharanom-baovao misokatra, fitaovana eo amin'ny sehatra hafa, novolavolaina tamin'ny fampiasana C ++ niaraka tamin'ny QT de mamela anao handinika sy hizara ny angon-tsoratry ny fitaovana ampiasain'ny bisikileta, mpihazakazaka ary triathletes. Izany hoe, ity rindrambaiko ity dia mifandray amin'ny metatra herinaratra sy fampisehoana, mamoaka ny angon-drakitra ary avy eo manolotra fampiasa ahafahana mamakafaka azy io, ary manome ny fahafaha-mizara sy mampitaha ny valiny amin'ireo atleta hafa.
Goldencheetah Izy io dia miaraka amina algorithman siantifika ahafahana mamakafaka amin'ny fomba matihanina, ny fampifangaroana betsaka amin'ny fitaovana marobe ary miaraka amin'ny serivisy rahona, manao azy ho fitaovana matanjaka izay mamporisika ny atleta hanatsara ny marika, hamakafaka ny tsy fahombiazany ary hametraka tanjona azo tanterahina bebe kokoa miaraka amin'ny tsy fahombiazan'ny tsy fahombiazana.
Ny galeriana misy pikantsary an'ny fampiharana dia azo jerena etsy ambany:
Anisan'ireo fiasa marobe amin'ny GoldenCheetah azontsika asongadina:
Ahafahana manondrana sy manafatra amin'ny rindranasa sy endrika hafa, ao anatin'izany; PWX, CSV, KML, TCX ary JSON
Fampidirana amina fitaovana maro karazana miaraka amin'ny fanohanan'ireto endrika data ireto:
Manome andiam-panadihadiana feno.
Fampidirana amin'ireo serivisy ao amin'ny Cloud.
Multiplatform (Linux, Windows ary MacOS)
Izy io dia manana kisary marobe hijerena sy handinihana ny angona momba ny dia sy elanelam-potoana.
Mamela ny fanovana mandroso ny mahazatra sy ny angon-drakitra nafarana, miaraka amin'ny fanitsiana sy ny fitantanana ny tantara.
Izy io dia manana fitaovana fanamboarana ho an'ny GPS, Spikes, Torque
Fitaovana fikarohana sy sivana tena tsara.
Manome fahaizana manara-maso ny fahombiazan'ny fanatanjahan-tena sy ny fanatanjahantena an'ny atleta.
Fifanarahana mahafinaritra sy haingana, miaraka amin'ny sary marobe ary miaraka amin'ny teknolojia drag-and-drop.
Mety ho fanaingoana mandroso.
Rindrambaiko nataon'ny atleta ho an'ny atleta, miaraka amina vondrom-piarahamonina mahafinaritra izay manohana azy ireo.
Ahoana ny fametrahana GoldenCheetah?
Ny fomba tsotra indrindra hametrahana GoldenCheetah dia ny mankany fizarana fampidinana fitaovana ary sintomy ny fonosana mifanaraka amin'ny distro anao, azonao atao koa ny manao azy mivantana avy amin'ny kaody loharano nampiantranoina Github.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » GNU / Linux » Rindrambaiko fampisehoana ho an'ny bisikileta, mpihazakazaka ary triathletes
Gustavo Paredes dia hoy izy:
Tena nahasoa ahy izany tamin'ny faran'ny taona 80 sy ny fiandohan'ny taona 90 !!
Nampahatsiahy ahy dingana mahafinaritra teo amin'ny fiainako ianao. Indurain, Pedro Delgado, ekipan'ny Once ...
Raha mahazo bisikileta indray aho dia mety hiverina aho… Snifff… ..
Fiarahabana avy any Arzantina
Valiny tamin'i Gustavo Paredes
Fotoana tsara foana hiverenana amin'ny fanatanjahan-tena
Ry mpiara-miasa, ianareo izay mahalala be dia be, ary tsy maneso izany lazaiko izany. Entanina ve ianao hanazava tsara ny fomba fiasan'ny UEFI ary raha hisy fiantraikany eo amintsika linuxers izany? Fantatro teo fa mikasa ny hanala ny BIOS mahazatra amin'ny taona 2020 izy ireo.
Azafady, mpiara-miasa amiko, raha manana famantaranandro Garmin fototra ianao, ahoana no fomba fampitahanao azy amin'ny Golden Cheetah raha vantany vao tafapetraka ny rindrambaiko.
Zentola dia hoy izy:
tsy misy garmin, na tena mpanao fanatanjahan-tena; DD
Heveriko fa tsy maintsy tehirizinao ao anaty garmin anao ireo fampahalalana ireo, ary avy eo aondraho any amin'ny programa Golden Cheetah:
«Ahafahana manondrana sy manafatra amin'ny rindranasa sy endrika hafa, ao anatin'izany; PWX, CSV, KML, TCX ary JSON »
Valiny tamin'i Zentola
Miguel Saona M dia hoy izy:
Salama, te hahafantatra aho raha azo atao ny mampiasa ilay programa raha tsy misy Internet miaraka amina roller marani-tsaina…. ???
Valiny tamin'i Miguel Saona M
Jery ​​todika ny fitrandrahana ny marefo
Kaongresy iraisam-pirenena momba ny fiofanana momba ny e-fianarana - Konferansa Chamilo